Zombieland: Double Tap (2019) – Gold Channel Movies
ZombieLand ( 2019 )
လာပါ‌ပြီ ၂၀၁၉ ရဲ့ ဇွန်ဘီ ဟာသကားလေးလည်းဖြစ် အားလပ်ရက်မိသားစုပျော်ပျော်ပါးပါးကြည့်ရမည့်သောက်တလွဲ ဇွန်ဘီ ဟာသကားကြီးလာပါပြီ ၊ မင်းသားအနေနဲ့ Now You See Me ထဲက မင်းသားနှစ်ဦးဖြစ်ကြတဲ့ Jesse Eisenberg နဲ့ Woody Harrelson တို့သရုပ်ဆောင်ထားပြီး မင်းသမီးအနေနဲ့ကတော့ Emme Stone ပါ ။
ဇွန်ဘီ လောကတွင်လွတ်မြောက်သူလေးယောက် အတူတူ ရှင်သန်ဖြတ်သန်းရင်း ရန်သွယ်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြပါတယ် ၊ တစ်နေ့သူတို့ဟာ အိမ်ဖြူတော်မှာအခြေချပြီးတော့ အေးအေးဆေးဆေးလေး ဘဝကိုဖြတ်သန်းနေပါတော့တယ် ၊ အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့် မင်းသမီး နှစ်ယောက် က မင်းသားတို့နှစ်ယောက်မသိအချိန်မှာ အပြင်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ် ။
တစ်လအကြာမှာ မင်းသမီးဖြစ်သူဟာ ပြန်ရောက်လာပြီး သူညီမပျောက်သွားကြောင်း သူ့ညီမကိုရှာရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကို အကူအညီလာတောင်းရင်း မင်းသားတို့အနေနဲ့ သူရဲ့ညီမနောက်ကိုလိုက်ပါတော့မယ်…. သူ့ရဲ့ညီမနောက်ကိုလိုက်ရင်းဖြစ်လာမှာတွေက ….. ဘယ်လိုဟာသတွေနဲ့တင်ဆက်မလဲဆိုတာက…. အရမ်းရယ်ရလို့လက်မလွတ်လိုက်နဲ့လို့ပြောရင်း …
Size – 910MB / 300MB
IMDb Rating 6.8 79,428 votes
TMDb Rating 6.9 1,364 votes
Download Yandex SD ျမန္မာ 300MB 472weeks gcmovies
Download Yandex HD ျမန္မာ 910MB 762weeks gcmovies
Download Megaup SD ျမန္မာ 300MB 722weeks gcmovies
Download Megaup HD ျမန္မာ 910MB 1862weeks gcmovies
Download GDrive SD ျမန္မာ 300MB 252weeks gcmovies
Download GDrive HD ျမန္မာ 910MB 752weeks gcmovies
Download Mediafire SD ျမန္မာ 300MB 1022weeks gcmovies
Download Mediafire HD ျမန္မာ 910MB 2302weeks gcmovies